मृतक बुबालाई ४ बर्षसम्म हेरक दिन ‘म्यासेस’ पठाउने छोरी ! - VOICE OF NEPAL
मृतक बुबालाई ४ बर्षसम्म हेरक दिन ‘म्यासेस’ पठाउने छोरी !
एजेन्सी । अमेरिकाको अर्कान्ससमा बस्ने एकजना युवतीलाई बुवाको मृत्युको शोकले लगातार ४ वर्षसम्म पिरोलिरह्यो । सुन्दा अनौठो लाग्न सक्दछ, तर उनले मृतक बुवाको यादमा बुवाको मोबाइल नम्बरमा हरेक दिन एउटा मेसेज पठाइरहिन् ।
पूरै ४ वर्षसम्म च्यास्टटी प्याटरसनले मृतक बुवाको मोबाइल नम्बरमा मेसेज पठाइन् । एकदिन अचानक उक्त मोबाइल नम्बरबाट उनलाई जवाफी मेसेज आयो । गत अक्टोबर २४ का दिन २३ वर्षीया प्याटरसनका बुवाको चौथो वार्षिकी थियो । हरेक दिनजस्तै उनले उक्त दिन पनि आफ्ना स्वर्गीय पिताको मोबाइलमा सन्देश पठाइन् । ‘हेल्लो बुवा, म छोरी हुँ । आजको दिन फेरि निकै मुस्किल हुनेवाला छ ।
तपाईंलाई गुमाएको चार वर्ष भयो । तर तपाईंको सम्झना नआएको कुनै दिन छैन । मलाई माफ गर्नुहोस, तपाईंलाई जब मेरो सबैभन्दा धेरै जरुरत थियो, म तपाईंसँग थिइन ।’ उनले आफूले ग्राजुएसन गरेको तथा क्यान्सर पनि निको भएको कुरा समेत उल्लेख गरिन् । मृतक बुवालाई मेसेज पठाउने उनको दैनिकी थियो । मृत्यु भैसकेका बुवाबाट जवाफ आउने कुनै अपेक्षा तथा सम्भावना पनि थिएन । तर, त्यसदिन भने चमत्कार नै भयो । उनले बुवालाई मेसेज पठाएको नम्बरबाट उनको मेसेजको जवाफ पो आयो ।
उक्त जवाफी मेसेज निकै आश्चर्यजनक र मार्मिक थियो । जवाफमा लेखिएको थियो, ‘हे प्यारी, म तिम्रो बुवा होइन । तर तिमीले चार वर्षदेखि पठाएका सबै मेसेज मैले प्राप्त गरेको छु । मेरो नाम ब्राड हो र सन् २०१४ मा भएको एक कार दुर्घटनामा मैले मेरी छोरी गुमाएको थिएँ । तिमीले पठाएका सन्देशले म बाँचेको छु । जब तिमी मेसेज गर्दछौं मलाई लाग्दछ यो भगवानले पठाएको सन्देश हो ।
’अगाडि लेखिएको थियो, ‘मैले वर्षौँदेखि तिम्रा मेसेज पढिरहेको छु । तिमी अगाडि बढिरहेको देखेको छु । तिम्रा मेसेजको सुरुमै जवाफ दिन चाहन्थेँ तर मैले तिम्रो मन दुखाउन चाहन्नथेँ तिमी एक असाधारण छोरी हौं र मलाई विश्वास छ मेरी छोरी आज जिवित हुँदिहुन् त तिमीजस्तै हुने थिइन् । हरेक दिनको अपडेटका लागि तिमीलाई धन्यवाद ।’
बेल्जियमद्वारा स्पेन र पोर्चुगलका केही स्थानहरुमा यात्रा प्रतिबन्धित , लिस्बन रेड जोनमा : नियम पालना नगर्नेलाई ४००० युरो जरिवाना सहित जेल सजाय !
चर्चभित्र गोली हानाहान,पाँच जनाको मृत्यु
डुङ्गा दुर्घटना २३ को मृत्यु, कैयौ बेपत्ता
लद्दाख झडपपछि भारतले दाबी गर्ने भूमिमा चीनले बनायो सैन्य क्याम्प!
चट्याङ लागेर १०७ जनाको मृत्यु
विश्व स्वास्थ्य संगठनको चेतावनी: संक्रमित बढेसँगैं विश्वभर अक्सिजन अभाव हुनसक्ने